Musharixiinta Puntland oo bayaan kasoo saaray Doorashada dhawaan dhacaysa – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika » Musharixiinta Puntland oo bayaan kasoo saaray Doorashada dhawaan dhacaysa
12 kamida Musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland doorashada 8 bishaJanaayo sannadka 2019 ayaa kulan kuyeeshay magaalada Garoowe.
Musharaxiintu waxaa ay kulankooda uga arinsanayeen doorashadda Puntland,waxaana ay ka muujiyeen walaac xoogan qaabka loo maamulayo doorashada sida amniga caasimadda Garowe iyo hanaanka xulista mudanayaasha Barlamaanka oo ay shegeen in ay gacan bidixaynayso xukuumadda waqtigeedu dhamanayo.
Anagoo ah musharrixiinta Puntland 2019 ee hoos ku saxiixan, waxaan walaac xooggan ka muujinaynaa habka xukuumadda xilkeedu dhammaaday ay u maamullayso doorashada siddeeda bisha Jannaayo sannadka 2019ka,Amniga caasimadda xilliga doorashada iyo la-dhaqanka Isimadda xaqa u leh in ay soo xulaan xubnaha ka mid noqonaya Baarlamaanka Puntland, sidaas darteed waxaan isla waafaqnay qodobbada hoos ku qoran;
1- In doorashada Puntland cidna aysan wax faragelin ah ku sameyn ee loo daayo reer Puntland in ay si xora ah hoggaankooda u doortaan.
2- Inay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta is baddel mug leh oo natiijadiisa ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco , maamulka waqtigiisii dhammaadeyna uusan doorashada marin habaabin .
3- In amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka Daraawiishta iyo Booliska Puntland.
Waxaa si wada wadajir ah warmurtiyeedkan usoo saray musharrixiinta hoos ku qoran.
1- Cabdirasaaq Cabdulaahi Jaamac Janagale
2- Faarax Cali Jaamac
3- Bashiir Maxamed Xuseen
4- Cali Xaaji Warsame
5- Maxamuud Khaliif Xasan
6- Maxamed Cismaan CaliMaad
7- Cabdi Faarax Saciid Juxa
8- Khaliif Ciise Mudan
9- Maxamed Cabdullaahi Xuseen
10- Cabdiweli Cabdiraxmaan Gayre
11- Aadan Maxamed Ciise Gaadaale
12- Maxamed Axmed Jaamac